Danjire Jamaal oo dib ugu Soo Laabtay Nairobi,ka dib Markii uu Shalay Garissa ugu Qeyb Galay Xuska Ardadii Lagu Xasuuqay Jaamacada Garissa”Sawirro” – Radio Muqdisho
Danjire Jamaal oo dib ugu Soo Laabtay Nairobi,ka dib Markii uu Shalay Garissa ugu Qeyb Galay Xuska Ardadii Lagu Xasuuqay Jaamacada Garissa”Sawirro”
Wafdi uu hogaaminayo danjiraha dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo ay ka mid ahaayeen qunsulka safaarada Cali Maxamed Shiikh Cali Begadi iyo xoghayaha koowaad ee safaarada ayaa galinkii danbe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Nairobi,ka dib markii ay shalay magaalada Garissa ee xarunta gobolka waqooyi bari uga soo qeyb galeen xus loo sameynayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay xasuuqii ay maliishiyaadka Al-shabaab Jaamacada garissa ugu geysteen 147 arday oo wax ka baraneysay Jaamacadaasi.
Munaasabada ayaa waxaa ka soo qeyb galay gudoomiyaha Countiga Garissa Nadiif Jaamac Aadan,xildhibaanka laga soo doorto magaalada garissa ahna gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale,xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya,maamulka jaamacada garissa,qaar ka mid ah ardadii ka badbaaday weerarkaasi,culumaa’udiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Munaasabada lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay xasuuqii ay maliishiyaadka UGUS u geysteen ardadii wax ka baraneysay Jaamacada Garissa ayaa mas’uuliyiintii ka hadlay waxa ay tilmaameen in maliishiyaadka AL-shabaab aysan xiri Karin jaamacada garissa oo ah tii ugu horeysay oo uu yeesho gobolka waqooyi bari ee Kenya.
Qaar kamid ah ardadii ka badbaaday weerarkaasi oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa ka sheekeeyay qaabkii uu u dhacay weerarkaasi,iyagoo sheegay in uusan waxbarashadodii ka niyad jabin doonin weerarkaasi lagu laayay saaxiibadood,ayna sii wadan doonaan waxbarashadoda.
Gudoomiyaha Countiga Garissa Nadiif Jaamac Aadan iyo xildhibaanka laga soo doorto garissa Aadan Barre Ducaale ayaa munaasabada ka sheegay in dowlada Kenya ay gacan ka siin doonto dowlada Soomaaliya sidii loo cirib tiri lahaa kooxda UGUS.
Danjiraha dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo khudbad ka jeediyay munaasabada lagu xusayay xasuuqii ay maleeshiyaadka UGUS u geysteen ardadii wax ka baraneysay jaamacada Garissa ayaa sheegay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan cirib tirka maliishiyaadka Al-shabaab.
Markii ay soo dhamaatay munaasabada ayaa mas’uuliyiintii ka qeyb gashay waxa ay gudaha jaamacada ka fureen taalo lagu qoray dhamaan 148-dii qof ee maliishiyaadka UGUS ay 02-04-2015 ku dileen jaamacada Garissa.
Ugu danbeyntii danjiraha dowlada Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa gudaha Safaarada ku talaalay geed.
Sawir qaade:-Hassan Omar Baffo
NISA oo Hub, Gaadiid iyo Maleeshiyaad la tuhunsanyahay gacanta ku soo dhigay
Qurbajoogta Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay ka qeyb qaataan dadka ay abaaruhu saameeyeen